Akanakisa Mitsara Mabhuku
Mutsara wakatsvaga "ndinofanira kunyora bhuku" unongedzera kuchiono cheicho chakararama sechiitiko chakasarudzika. Chimwe chinhu icho hupupuriro hwakaiswa nhema chena chingaita kuti ivo vamwari veOlympus vadedere. Ikozve kune icho chimwe chirevo che «Chero zuva randinotanga kunyora ...
Niadela, naBeatriz Montañez
Beatriz Montañez akateerera iro izwi remukati iro dzimwe nguva rinobva mukuzevezera kusvika pakupururudza pakati peruzha runobva kunze. Uye cherekedza kuti pano mumwe akafanofungidzira iye mugadziri we «El Intermedio» achifunga kuti iye nyowani nyanzvi yekubheja ingadai isina kubuda zvakanaka paakange anyangarika ...
Tsoka: Mukutsvaga Nyika Tichasiya, naDavid Farrier
Vachationa sei mune ramangwana? Mune mamwe mazwi, inyaya yekufungidzira wechidiki kubva mugore ra3024, chero rudzi rwaangave ari, pamberi pebhuku rekuverenga kuverenga nezvehunhu hwakagara pasi pano panguva yekugomera kwedu mudenga. Zvichida wechidiki anofunga kushamisika ...
Ndinokufadza iwe, naCarlos del Amor
Vanouya ndokuparadza zvese pamabhaisikopo emabhuku. Ini ndinoreva kune vezvenhau vatambi vane hupenyu neakasiyana mhanza mune iri zvinyorwa. Kubva Carme Chaparro kunyangwe Monica Carrillo kana Carlos del Amor pachake (Ini ndinorega kutaura dzimwe nyaya dzisingataurike dzeakakurumbira, kupusha izvo ...
Kwakatangira Vamwe, naToni Morrison
Achisvika panzvimbo yekudzidzira, Toni Morrison anopinda mune iri zano rakareruka, iro revamwe. Iko kubata kunopedzisa kugadzirisa mamiriro akakosha akadai sekugara pamwe munyika yepasi rose kana kudyidzana pamatanho ese pakati petsika dzakasiyana. Izvo ndizvo zviripo parizvino, kutaurirana pakati pemadzinza, dzidzo, ...
Kuongorora nekufungisisa, naSam Bleakley
Edhisheni Siruela nguva pfupi yadarika akatipa bhuku reKushambira Mumvura Yakavhurika, sumo inonakidza kugungwa senzvimbo iri pakati penyama neyemweya kune chero munhu anodonhera mumvura yegungwa rakavhurika. Uye ino nguva muparidzi mumwe chete anotikoka ku ...
Udzvanyiriri husina Vadzvanyiriri, naDavid Trueba
Mushure menganonyorwa yake yapfuura Tierra de Campos, David Trueba anotora zororo kana zvasvika mungano yekuburitsa bhuku rine rondedzero yemagariro uye kurudziro. Izvo ndezve kufunga zvishoma nezve transcendental, nezve nuances yekukodzera pakati peanthropology uye iyo ...